JỌN 8 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (JỌN 8)
Jisọs lọghachiri azụ nꞌugwu ahụ a na-akpọ Olivet.
Nꞌechi ya, nꞌisi ụtụtụ, ọ banyere nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke. Mgbe na-adịghị anya, ndị na-eso ụzọ ya na ọtụtụ igwe mmadụ bịakwutere ya, gbaa ya gburugburu. O guzoro nꞌetiti ha malite izi ha ihe.
Mgbe ọ nọ na-ekwu okwu, ndị isi ndị Juu na ndị Farisii bịakwutere ya. Lee! ha dọkpụ otu nwanyị onye ha jidere mgbe ọ nọ na-akwa iko. Ha mere ka nwanyị ahụ guzo nꞌetiti igwe mmadụ ahụ nile.
Mgbe ahụ ha jụrụ Jisọs ajụjụ sị ya, “Onye ozizi, lee, anyị jidere nwanyị a nꞌime ịkwa iko, ọ bụladị mgbe ya na nwoke dina!
Iwu Mosisi nyere anyị kwuru na onye mere ihe dị otu a kwesịrị ka anyị jiri nkume tụgbuọ ya. Gịnị ka i nwere ikwu banyere nke a?”
Mgbe ha nọgidere na-esogbu ya ka okwu si ya nꞌọnụ pụta, Jisọs lelitere anya ya elu gwa ha sị, “Unu nwere ike tụọ nwanyị a nkume ugbu a. Ma achọrọ m ka onye ga-ebu ụzọ tụọ ya nkume bụrụ onye nke na-emebeghị mmehie nꞌoge ọ bụla.”
Jisọs hurukwara ala ọzọ malitekwa ide ihe ọ na-ede nꞌala.
Mgbe ndị ahụ kpụtara nwanyị ahụ nụrụ ihe Jisọs kwuru, ha nile nꞌotu nꞌotu, malite nꞌonye okenye ha, sitere nꞌebe ahụ pụọ. Nꞌikpeazụ, ọ fọdụrụ nanị Jisọs na nwanyị ahụ.
Mgbe Jisọs guzoro ọtọ lee anya gburugburu, o nweghị onye ọ bụla ọ hụrụ karịa nanị nwanyị ahụ. Jisọs jụrụ nwanyị ahụ ajụjụ sị, “Olee ndị ahụ kpọtara gị nꞌebe a? Ò nweghị onye ọ bụla nꞌime ha mara gị ikpe?”
Nwanyị ahụ zaghachiri ya sị, “O nweghị onye ọ bụla nꞌime ha mara m ikpe, Onyenwe m.” Jisọs sịrị ya, “Mụ onwe m amakwaghị gị ikpe. Laa nꞌụlọ gị, kama emehiekwala ọzọ.”
Ndị Farisii nọ nꞌebe ahụ zaghachiri ya sị, “Ị na-agbara onwe gị ama! Ya mere ama ị na-agbara onwe gị erijughị afọ.”
Ma Jisọs gwara ha sị, “Ọ bụ eziokwu na m na-agbara onwe m ama, ma ama m na-agba bụ eziokwu. Amaara m ebe m si bịa, amakwara m ebe m na-aga. Ma unu onwe unu amaghị ihe ndị a nile.
O nweghị ihe ọ bụla unu ma banyere m. Ma unu na-ekpe m ikpe. Otu ọ dị, ikpe ikpe nke m abụghị nꞌoge dị ugbu a.
Mgbe ọ bụla m jikeere ikpe ikpe, aga m ekpe ikpe ziri ezi. Nꞌihi na Nna m, onye zitere m, na-agbara m ama.
Iwu unu kwuru sị, ‘Ama mmadụ abụọ gbara banyere ihe ọ bụla bụ eziokwu.’
Ana m agba ama banyere onwe m. Otu a kwa Nna m, onye zitere m, na-agbakwa ama banyere m.”
Mgbe ahụ ha jụrụ Jisọs sị ya, “Olee ebe Nna gị nọ?” Jisọs zaghachiri ha sị, “Ebe unu na-amaghị onye m bụ, unu apụghị ịmata onye Nna m bụ. Ọ bụrụ na unu matara m unu ga-amatakwa onye Nna m bụ.”
Mgbe oge ntakịrị gasịrị, Jisọs gwara ha okwu ọzọ sị, “Nꞌoge na-adịghị anya, aga m ahapụ unu, unu gaachọ m ma unu agaghị ahụ m anya. Nꞌihi nke a unu ga-anwụ nꞌime mmehie unu. Ma unu apụghị ịbịa nꞌebe m nọ.”
Ndị Juu ahụ jụrịtara onwe ha ajụjụ sị, “Nwoke a ọ̀ ga-egbu onwe ya? Gịnị ka okwu ndị a ọ na-ekwu pụtara, ‘Unu apụghị ịbịa nꞌebe m na-aga?’ ”
Jisọs sịrị ha, “Unu si nꞌụwa ma esi m nꞌelu bịa. Unu bụkwa ndị ụwa, ma abụkwaghị m nke ụwa. Kama esitere m nꞌeluigwe bịa.
Ọ bụ nꞌihi nke a ka m ji gwa unu na unu ga-anwụ nꞌime mmehie unu. Nꞌihi na ọ bụrụ na unu ekweghị na abụ m Onye nzọpụta ahụ, Ọkpara Chineke, unu ga-anwụ nꞌime mmehie unu.”
Ya mere, ndị Farisii ahụ jụrụ Jisọs ajụjụ sị ya, “Onye ka ị bụ?” Jisọs zara sị ha, “Abụ m onye ahụ m gwara unu na m bụ na mbụ.
Enwere m ọtụtụ ihe m ga-ezi unu, ma matanụ na onye ahụ zitere m bụ onye eziokwu. Nꞌihi nke a ihe nile m nụrụ site nꞌọnụ ya ka m gwara unu.”
Ọ bụ ihe banyere Chineke ka Jisọs na-agwa ha, ma ha aghọtaghị ihe ọ na-ekwu.
Nꞌihi nke a, Jisọs dọrọ ha aka na ntị sị, “Mgbe unu mere ka m nwụọ, unu ga-amata na unu egbuola Onye nzọpụta ahụ, bụ onye Chineke zitere. Unu ga-amatakwa na ihe nile m gwara unu esiteghị nꞌuche m kama ha bụ ihe nile Nna m chọrọ ka m gwa unu.
Chineke onye zitere m naanọnyekwara m mgbe nile. Ọ hapụkwaghị m mgbe ọ bụla. Ọ bụkwa ihe na-atọ ya ụtọ ka m na-eme mgbe nile.”
Mgbe Jisọs kwusịrị okwu ndị a, ọtụtụ ndị nụrụ okwu ya, kweere na ya.
Ya mere, Jisọs chigharịrị gwa ndị ahụ nile kweere na ya sị, “Ọ bụrụ na unu anọgide nꞌihe nile m gwara unu, unu ga-abụ ndị na-eso ụzọ m nꞌeziokwu.
Ndị Juu ahụ zara Jisọs sị, “Anyị bụ ụmụ Eberaham, o nwebeghị oge anyị ji bụrụ ohu onye ọ bụla. Olee otu ị ga-esi mee ka anyị nwere onwe anyị?”
Jisọs zara ha sị, “Nꞌezie, asị m unu, onye ọ bụla na-eme mmehie bụ ohu mmehie.
Ohu enwekwaghị onwe ya mgbe ọ bụla ọ nọ nꞌụlọ onyenwe ya. Ma Ọkpara onye nwe ụlọ ahụ nwe onwe ya, nꞌihi na ọ na-anọgide nꞌụlọ ahụ oge nile.
Ya mere, ọ bụrụ na Ọkpara ahụ ga-eme ka unu pụọ nꞌohu, unu agaghị abụkwa ohu ọzọ. Kama unu ga-enwere onwe unu.
Ọ bụ ezie na unu sitere nꞌagbụrụ Eberaham pụta. Ma unu na-achọ ụzọ igbu m. Unu chọkwara ime nke a nꞌihi na okwu m enweghị ọnọdụ nꞌime unu.
Ma ugbu a ana m akọwara unu ihe m hụrụ mgbe mụ na Nna m nọ. Unu onwe unu na-emekwa ihe unu mụtara site nꞌaka nna unu.”
Ha zara Jisọs sị ya, “Eberaham bụ nna anyị.” Jisọs sịrị ha, “Ọ bụrụ na unu bụ ụmụ Eberaham, unu gaara arụ ọrụ Eberaham rụrụ.
Ma unu na-achọ ụzọ igbu m nꞌihi na m gwara unu eziokwu ahụ m nụrụ site nꞌọnụ Nna m. Eberaham, onye unu na-ekwu na ọ bụ nna unu, emesoghị m omume ọjọọ dị otu a.
Kama ọ bụ ọrụ ọjọọ nke nna unu chọrọ ka unu na-arụ.” Ndị isi ndị Juu ahụ zara sị ya, “Anyị abụghị ndị a mụrụ site nꞌịkwa iko. Anyị nwere Chineke dị ka nna anyị.”
Jisọs gwara ha sị, “Ọ bụrụ nꞌezie na Chineke bụ nna unu, unu ga-ahụ m nꞌanya. Nꞌihi na ọ bụ Chineke zitere m. Abịaghị m site nꞌike nke m.
Gịnị mere unu adịghị aghọta ihe m na-agwa unu? Nke a pụtara na ọ dị onye na-eme ka unu hapụ ịghọta ihe ndị a nile m na-akọrọ unu.
Unu adịghị ekwere ihe nile m gwara unu nꞌihi na ha bụ eziokwu. Unu apụkwaghị ịghọta eziokwu.
“Onye nꞌime unu nile pụrụ ibo m ebubo mmehie ọ bụla? Ọ bụrụ na unu apụghị ịkwagide na m bụ onye mmehie, gịnị mere unu jiri jụ ikwere nꞌokwu m nile? Ihe nile m na-ekwu bụ eziokwu.
Onye ọ bụla nwere Chineke dị ka nna ya ga-anabata okwu Chineke. Ya mere, unu onwe unu abụghị ụmụ Chineke nꞌihi na unu achọghị ịnụ okwu ya.”
Anaghị m ebuli onwe m elu. Kama ọ bụ ọchịchọ Chineke ka e bulie m elu. Ọ bụkwa Chineke gaekpe ndị nile jụrụ m ikpe nꞌotu nꞌotu.
Nꞌezie, nꞌezie, asị m unu, onye ọ bụla na-edebe okwu m nile agaghị anwụ ọzọ.”
Ndị isi ndị Juu ahụ sịrị, “Ahaa! anyị maara ugbu a na ị bụ onye isi mebiri. Eberaham na ndị amụma nile a maara aha ha nwụrụ kemgbe oge dị anya. Ma gị onwe gị na-asị na onye ọ bụla kweere na gị agaghị anwụ ruo mgbe ebighị ebi.
Ị na-akọwa na ị dị ukwuu karịa nna anyị Eberaham na ndị amụma ndị nwụrụ kemgbe oge dị anya? Gịnị ka ị na-eche na ị bụ?”
Jisọs gwara ha sị, “Ọ bụrụ na m naanya isi banyere onwe m, nke a abaghị uru. Kama Nna m onye unu na-asị na ọ bụ nna unu, bụ onye na-ebuli m elu.
Unu amakwaghị onye Chineke bụ. Amaara m ya nke ọma. Aga m abụ onye ụgha ma ọ bụrụ na m gaasị na amaghị m onye ọ bụ. Amaara m ya, na-edebekwa okwu ya nile.
Nna unu Eberaham ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu ma chọsiekwa ike ịhụ ụbọchị ndị a anya. Ọ ṅụrịrị ọṅụ nꞌihi na ọ matara na mụ onwe m ga-abụ Onye nzọpụta ahụ.”
Mgbe ahụ ndị isi ndị Juu ahụ nile sịrị ya, “Ị gbabeghị iri afọ ise, ị si aṅaa hụ Eberaham anya?”
Ma Jisọs zara sị ha, “Eziokwu ahụ bụ nke a, mụ onwe m na-adịrị ndụ tupuu amụọ Eberaham!”
Ndị isi ndị Juu ahụ nile were iwe nke ukwuu mgbe ha nụrụ ihe Jisọs kwuru. Ha nile tụtụlitere nkume ịtụ ya. Ma site nꞌụzọ ihe ịrịba ama dị iche, Jisọs zoro onwe ya site nꞌihu ha pụọ. O sitere nꞌụlọ nsọ ukwu ahụ pụọ.
JỌN 1 / JỌN 1
JỌN 2 / JỌN 2
JỌN 3 / JỌN 3
JỌN 4 / JỌN 4
JỌN 5 / JỌN 5
JỌN 6 / JỌN 6
JỌN 7 / JỌN 7
JỌN 8 / JỌN 8
JỌN 9 / JỌN 9
JỌN 10 / JỌN 10
JỌN 11 / JỌN 11
JỌN 12 / JỌN 12
JỌN 13 / JỌN 13
JỌN 14 / JỌN 14
JỌN 15 / JỌN 15
JỌN 16 / JỌN 16
JỌN 17 / JỌN 17
JỌN 18 / JỌN 18
JỌN 19 / JỌN 19
JỌN 20 / JỌN 20
JỌN 21 / JỌN 21